The Call (2020) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Jeon Jong-seo, Jo Kyung-sook, Kim Min-ha, Kim Sung-ryung, Lee Dong-hwi, Lee El, Oh Jung-se, Park Ho-san, Park Shin-Hye, Um Chae-young
Park Shin-hye ရဲ့ဒီနှဈထဲထှကျရှိခဲ့တဲ့ Alive ကော The Call ကော admin တို့က recommand ပေးခငျြပါတယျ။ Zoombie ဇာတျကားကွိုကျသူတှအေတှကျ Alive (2020)။ The Call (2020) ကတော့သညျးထိတျရငျဖိုကားကွိုကျသူတှအေတှကျ။ ဇာတျလမျးအကြဥျးကတော့ 2019 မှာနထေိုငျတဲ့ Soe-yeon (Park Shin-hye) နဲ့ 1999 မှာနထေိုငျတဲ့ Young-sook (Jeon Jong-seo) တို့ကဖုနျး call တဈခုကနဆေကျသှယျမိပွီးကံကွမ်မာ ပွောငျးဖို့လုပျရာ ဘာတှဆေကျဖွဈမလဲဆိုတာကတော့. . . . .
Park Shin-hye ရဲ့ဒီနှစ်ထဲထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Alive ကော The Call ကော admin တို့က recommand ပေးချင်ပါတယ်။ Zoombie ဇာတ်ကားကြိုက်သူတွေအတွက် Alive (2020)။ The Call (2020) ကတော့သည်းထိတ်ရင်ဖိုကားကြိုက်သူတွေအတွက်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ 2019 မှာနေထိုင်တဲ့ Soe-yeon (Park Shin-hye) နဲ့ 1999 မှာနေထိုင်တဲ့ Young-sook (Jeon Jong-seo) တို့ကဖုန်း call တစ်ခုကနေဆက်သွယ်မိပြီးကံကြမ္မာ ပြောင်းဖို့လုပ်ရာ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့. . . . .
Jeon Jong-seo Jo Kyung-sook Kim Min-ha Kim Sung-ryung Lee Dong-hwi Lee El Oh Jung-se Park Ho-san Park Shin-Hye Um Chae-young
Option 1 server.mfile.cloud 526 MB SD (480p)
Option21fichier.com 526 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 526 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 526 MB SD (480p)
Option61fichier.com 1.3 GB HD (1080p)